Fijerena ny JW.ORG Amin’ny Fitaovana Entin-tanana | Fanampiana JW.ORG
Azo jerena amin’ny telefaonina sy tablette daholo ny zava-drehetra ato amin’ity tranonkala ity, toy ny rehefa mampiasa ordinatera ihany. Miova kely anefa ny paoziny rehefa jerena amin’ny fitaovana elektronika misy efijery kely kokoa. Hanampy anao hahita ny zavatra tadiavinao ato amin’ny jw.org ny hevitra atoro anao ato.
Hampiasa ny fizarana samihafa
Hijery lahatsoratra sy toko amin’ny boky
Hihaino lahatsoratra noraisim-peo
Raha ordinatera no ampiasaina mba hijerena an’ity tranonkala ity, dia tsy miala eo amin’ny farany ambony amin’ny efijery ireo fizarana lehibe, ary eo amin’ny sisiny havia ny fizarana ao anatiny.
Raha amin’ny efijery kely kosa no ijerena an’ity tranonkala ity, dia anaty tsanganana no miseho ny fizarana rehetra. Tsy mipoitra izy ireo rehefa tsy ampiasaina, mba ho azo ijerena an’ilay tranonkala ny ankabeazan’ilay efijery.
Tsindrio ilay sary kely mampiseho ny Lisitra raha tianao hiseho na tianao tsy hiseho ny lisitry ny fizarana. Tsindrio avy eo izay fizarana tianao hosokafana.
Tsindrio ilay sary kely mampiseho hoe Hanokatra raha tianao hojerena ny fizarana ao anatiny. Fidio avy eo izay tianao hosokafana.
Tsindrio ilay sary kely mampiseho hoe Hanidy raha tsy tianao hojerena intsony ny fizarana ao anatiny.
Tsindrio ny bokotra JW.ORG raha te hiverina eo amin’ny pejy fandraisana ianao.
Tsindrio ny sary kely Fifidianana Fiteny raha tianao ho hita ny lisitry ny fiteny ao amin’ilay tranonkala.
Tsindrio ilay sary kely mampiseho hoe Hikaroka raha te hampiasa ny Fikarohana Anaty Tranonkala ianao mba hitadiavana fanazavana. (Mbola tsy misy an’io amin’ny malagasy)
Hita eo amin’izay pejy vakinao foana ny loha hevitra ao anatin’ilay boky na gazety misy azy io, raha ordinatera no ijerenao azy. Tsy hiseho kosa ireo loha hevitra ireo raha efijery kely no ampiasainao.
Tsindrio ilay sary kely mampiseho hoe Hijery Lisitra raha tianao hiseho ny loha hevitra ao anatiny. Tsindrio avy eo ny lohateny iray ao amin’ilay lisitra raha tianao hovakina ny lahatsoratra na toko mifandray amin’izy io.
Tsindrio ilay sary kely mampiseho hoe Hiverina raha hamaky ny lahatsoratra na toko teo aloha ianao.
Tsindrio ilay sary kely mampiseho hoe Manaraka raha hamaky ny lahatsoratra na toko manaraka ianao.
Tsindrio ilay sary kely mampiseho hoe Hanidy Lisitra raha tsy hijery an’ireo loha hevitra intsony ianao fa hanohy hamaky lahatsoratra.
Midira ao amin’ilay hoe ZAVATRA MISY > BAIBOLY, ary tsindrio ny hoe HAMAKY. Azonao tsindriana koa ilay hoe Vakio ato ny Baiboly, eo amin’ny pejy fandraisana.
Ampiasao ilay Fijerena Baiboly, mba hifidianana ny boky sy toko tianao hovakina. Tsindrio avy eo ny hoe Hijery.
Mijanona eo an-tampon’ilay pejy foana ilay Fijerena Baiboly rehefa mamaky an’ilay toko ianao, mba ho mora kokoa aminao ny hijery toko hafa.
Tsindrio ilay sary kely mampiseho hoe Hanaisotra raha tsy tianao hijanona eo ambonin’ilay pejy intsony ilay Fijerena Baiboly. Halalaka kokoa amin’izay ny toerana azonao ampiasaina hamakiana Baiboly. Mila miverina eny am-piandohan’ilay pejy indray ianao, na eny amin’ny farany ambany, raha te hijery toko hafa.
Tsindrio ilay sary kely mampiseho hoe Hametaka raha tianao hijanona eo ambonin’ilay pejy indray ilay Fijerena Baiboly.
Tsindrio ilay sary kely mampiseho hoe Hijery Lisitra raha tianao hiseho ireo boky ao amin’ny Baiboly.
Tsindrio ilay sary kely mampiseho hoe Hiverina raha hamaky ny toko teo aloha ianao.
Tsindrio ilay sary kely mampiseho hoe Manaraka raha hamaky ny toko manaraka ianao.
Tsindrio ilay sary kely mampiseho hoe Hanidy Lisitra raha tianao hakatona ny loha hevitra ao anatin’ny Baiboly.
Hipoitra ny sary mampiseho Raki-peo raha azo henoina ilay lahatsoratra sokafanao.
Tsindrio ilay sary kely mampiseho hoe Handefa raha tianao hohenoina ilay izy.
Tsindrio ilay sary kely mampiseho hoe Hampiato raha tianao haato ilay izy. Tsindrio indray ilay Handefa raha tianao hitohy ilay izy.
Azo akisaka mankeo aloha na mankeo aoriana ny bokotr’ilay raki-peo, arakaraka izay tianao hohenoina.
Raha alefanao ilay raki-peo ka midina ihany ianao ao amin’ilay lahatsoratra, dia hijanona eo amin’ny farany ambony eo foana ilay sary mampiseho Raki-peo. Ho afaka hampiato sy hanohy an’ilay raki-peo ianao, amin’izay, nefa mbola ho hitanao foana hoe aiza ho aiza ao amin’ilay lahatsoratra ianao.